Kenya oo howlgal qorsheysan ku qabatay lix ruux oo Shabaab lala xiriiriyay – STAR FM SOMALIA
Booliska dalka Kenya ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 6 qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al Shabaab, kuwaasi oo lagu qabtay gudaha dalka Kenya.
Booliska ayaa waxay sheegeen inay xireen lixdaan qof ayna ku xireen gobolka xeebta dalka Kenya, unug gaar ah oo ka tirsan Booliska Kenya ayaa ugu dhacday guryahooda soona xiray .
Lixdaan qof ayaa dambi baarista waxay ku eedeysay inay dhaqaalo ay ku taageerayeen Al-Shabaab sida ay sheegeen Booliska Kenya.
Sidoo kale Lixdaan qof ayaa waxay sheegeen Booliska inay ku soo qabteen agabyo ay ka mid yihiin Computero iyo taleefanno ay isticmaalayeen.
Taliyaha ciidanka Booliska dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay dadkaan la baari doono xiriirka kala dhaxeeya Al-Shabaab, taliyaha ayaa waxa uu intaas ku daray in baarista ay wadaan dad taqasus u leh dambi baarista.
Booliska ayaa eedeysanayaashaan ku eedeeyay inay ka mid yihiin unugyo dagaalyahannada u qora sida ay ugu biiri la haayeen Al-Shabaab.
Eedeysanayaasha ayaa waxay sheegeen Booliska inay ku jirto haweenay gabdhaha yar yar u sahlaysay inay u safraan Soomaaliya ayna ku biiraan Al-shabaab.
Dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay inay ku jirto heegan aad u sareeya iyadoo ka feejigan suurto galnimada qaraxyo ay Al-shabaab ay ka geestaan waddankeeda.